न्यायाधीशहरुकै अगाडि डा.केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको भ्रष्ट छविको यसरी गरे पर्दाफास – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
न्यायाधीशहरुकै अगाडि डा.केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको भ्रष्ट छविको यसरी गरे पर्दाफास
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानविनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने अडान
प्रकाशित मिति : २०७४ पुस २६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बयान दिने क्रममा न्यायाधिशहरुले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिंदै डा.गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको भ्रष्ट छविको पर्दाफास गर्दै निज पराजुलीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । १४ वटा प्रश्न समेटिएको वयानमा उनले भनेका छन्, “नागरिकतासम्वन्धी विवाद, चूडामणिसम्वन्धी राजस्व छली, आयल निगम, एनसेल, भूमाफिया र नातावादसम्वन्धी लगायतका क्रियाकलाप गर्दा न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएका कारणले निज(गोपाल पराजुली)बाटै अदालतको अवहेलना भएकाले निजउपर अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने हो ।”
उनले भनेका छन्, “म उपर लगाएको आरोप झुठ्ठा हो । मैले अदालतको अवहेलना गरेको छैन । निज सम्माननीय प्रधानन्ययाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानविनको दायरामा ल्याई कारवाही गरे न्यायालयको गरिमाको वृद्धि हुन्छ ।”
हेर्नुस सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा लिएको डा. केसीको वयानको पूर्णपाठ :
सवाल १ः हजुरको बाजे, बुबाको नाम थर वतन र हजुरको नाम थर बतन र पेशा व्यवसाय खुलाई दिनुहोस् ?
जवाफः मेरो हजुरवुबाको नाम नरबहादुर, बुबा उदयबहादुर र मेरो नाम डा. गोविन्द केसी हो । पेशाले चिकित्सक हुँ । वर्ष ६१ को भएँ ।
सवाल २ः हजुरको स्वास्थ्य स्थिति के कस्तो छ ? कुनै शारीरिक र मानसिक रोग छ छैन ? आज इजलाससमक्ष वयान दिन सक्नुहुन्छ या हुँदैन ?
जवाफः म हिजोदखि अनसनमा रहेको हुँदा मुटुको धड्कनमा आफूलाई महसुस हुने बढेको छ । छाती दुखेको छ । अरु कुनै शारीरिक र मानसिक रोग छैन । वयान दिन सक्छु ।
सवाल ३ः तपाई आज यस सर्वोच्च अदालतमा किन उपस्थित हुनु भएको हो ?
जवाफः मलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराइएको छ । कुन कानुनअन्तर्गत के अपराधमा पक्राउ गरेर ल्याइएको हो मलाई थाहा दिइएको छैन र पनि तपाईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन तयार छु ।
सवाल ४ः हजुरले आफ्नो कुनै कानुन व्यवसायी यस मुद्दामा राख्नु भएको छ छैन ?
सवाल ५ः यस प्रतिवेदनमा पेश भएको समाचार सामाग्री तथा प्रेस विज्ञप्ति देखाई सोधिन्छ, यो व्यहोरा तपाईको हो होइन ? तपाईले भन्नुभएको कुरा अशिष्ट, अमर्या्दित र अदालतको अवहेलनाजनक हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ लाग्दैन ? बताई दिनुहोस् ।
जवाफः अनलाइन र सेतोपाटीलगायतका खबर पत्रिकाका बारेमा म भन्न सक्दिनँ र प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७४।९।२४ मा मैले नै प्रेषित गरेको हो । यो विज्ञप्ति अदालतको अवहेलना हुनेगरी अशिष्ट, अमर्या्दित तवरले प्रकाशित गरेको होइन । अदालतप्रति सम्मान छ । अदालतको अवहेलना गरेजस्तो मलाई लाग्दैन ।
सवाल ६ः तपाईले के कति आधार र कारणबाट यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ?
जवाफः श्री सर्वोच्च अदालतका समान्नित प्रधानन्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद पराजुलीले गर्नुभएको कतिपय निर्णय र कार्यहरुले न्यायको मानमर्दन भएकाले मैले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको हुँ ।
सवाल ७ः तपाईले सवाल ६ को जवाफमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गर्नुभएको कतिपय निर्णय र कार्यहरुले न्यायालयको मानमर्दन भएको भन्नुभयो । यसको पुष्टि गर्ने आधारहरु केही छ ? खुलाई दिनुहोस् ।
जवाफः यसमा मैले भन्नुपर्दा प्रेस विज्ञप्तिमा (पाना ४) उल्लेख भएका मुद्दाहरु नै मेरा आधार र कारण प्रष्ट्याउन पर्याप्त छन् । सो का अलावा पाना २ को मिति २०७४।९।२५ को दस्तावेजको विवरण पेश गरेको छु, त्यसले वास्तविकता प्रष्ट्याउनेछ । अनलाइनबाट प्राप्त ३ प्रति नागरिकता समेतको प्रतिलिपि पेश गरेको छु । सोलाई आधार मानी पाउँ । सो नागरिकता सम्माननीय प्रधानन्यायधीशको हो ।
सवाल ८स् अदालतले संविधान कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार न्याय सम्पादन गर्दछ भन्ने तपाईलाई थाहा छ छैन ? अदालतको आदेश फैसलाप्रति घृणा सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने र सजायँ समेत हुन्छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ छैन ? खुलाई दिनुहोस् ।
जवाफः अदालतको अवहेलनामा सजायँ हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई थाहा छ । सही न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरुलाई म सम्मान गर्दछु । अदालतलाई घृणा हुने अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन ।
सवाल(९ः तपाईले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायधीश भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । यो अदालतप्रति घृणा सिर्जना गर्ने र अदालतको अवहेलना हुनेखालको हैन र ? हजुरको यस्ता शब्दले अदालतको सम्मान हुन्छ ?
जवाफः यसको जवाफका लागि आधार र कारणसहित कागजात सावाल ७ मा पेश गरेको छु । त्यसैलाई आधार मानी पाऊँ । गलत निर्णय र कार्य गर्ने न्यायाधीशको बारेमा बोल्दा अदालतको अवहेलना होइन सम्मान मिल्छ ।
सवाल १०ः तपाईले अदालतको आदेश र फैसलाप्रति चित्त नबुझे मर्या्दित ढंगले असहमति व्यक्त गर्न सकिने अवस्थामा अदालतप्रति जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी अशिष्ट र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुका कारण के हो ? प्रष्ट पार्नु हुन्छ कि ?
डा. केसीको बयानः मैले होइन, गोपाल पराजुलीले अदालतको अवहेलना गरेका छन्
प्रहरी हिरासतमा रहेका डा. गोविन्द केसी वीर अस्पतालमा भर्ना
‘माफियातन्त्र सल्बलायो, नैतिकता हरायो’ (फोटो फिचर)
जवाफः मैले अदालतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु । मैले पेश गरेको प्रकरण ७ अर्थात जवाफमा पेश गरेका कागजात नै पर्याप्त छ, मैले भावननाले बगेर बोलेको होइन । मेरो प्रयासले अदालत र जनमानसमा राम्रो प्रभाव परोस् भनी भनेको हुन्छ । अशिष्ट र लाञ्छनायुक्त छैन ।
सवाल ११ः तपाई नागरिक समाजको अगुवा भन्नुहुन्छ । अदालतको आदेश वा फैसलाउपर पुनरावेदन, पुनरावलोकन गराउनेतर्फ तपाईले के गर्नुभयो ? के तपाईले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्नुभयो ?
जवाफः म नागरिक समाजको अगुवा भनेर कहिले पनि भनेको छैन । म सामान्य सचेत नागरिक हुँ । म मुद्दाको पक्ष विपक्ष नभएकाले पुनरावेदन र पुनरावलोकन लगायतका कानूनी प्रक्रियामा जाने कुरा भएन । सचेत नागरिक भएकाले स्वस्थ्य आलोचना मात्र गरी अदालत लगायत समाज घच्घच्याएको हुँ ।
सवाल १२ः के तपाईको चाहना अदालतको मुद्दामा तपाईले नै भनेवमोजिम फैसला हुनुपर्छ भन्ने हो ? होइन भने सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाप्रति किन असहिष्णु हुनुभएको हो ? खुलाई दिनोस् ।
जवाफः न्याय सम्पादन राम्रो हुनुपर्दछ । न्याय सबैले पाउनुपर्दछ । मेरो पक्षमा मात्र फैसला हुनुपर्दछ भनी मैले भन्न खोजेको होइन । न्यायमा विकृतिहरु भित्रिएको देखेर शुद्धीकरणको लागि बोलेको हुँ । सही फैसला आएको भए आलोचना गर्नुपर्ने थिएन । फैसलाको आलोचना गर्नु अदालतको अवहेलना होइन ।
सवाल १३ः मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको न्यायपालिका विरुद्ध अमुख मुद्दामा भएको आदेशका कारण अनर्गल अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने दायित्ववोध तपाईलाई छ छैन ?
जवाफ : मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउनु नै यो मेरो प्रयास हो । मैले दिएका अभिव्यक्ति अनर्गल होइन । तीन करोड नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी संविधानप्रदत्त स्वस्थ्य रहेर जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकारमा हनन हुने फैसला भएकाले मैले सबैलाई सचेत गराउन खोजेको मात्र हुँ । मैले न्यायपालिकाविरुद्ध बोलेको होइन । लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गराउनु नै मेरो यो अभिव्यक्ति हो र सचेत नागरिकको दायित्व पनि हो ।
सवाल १४ः यस सवाल १ देखि १४ सम्म पढीबाची सुनाइन्छ कि यसविषयमा तपाईको अरु भन्नु केही छ कि ?
जवाफः मेडिकल कलेज सम्बन्धी सुधारको लागि मैले विगत डेढ दशकदेखि गर्दै आएको प्रयास हो । स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रका लागि आन्दोलन जारी राखेको छु । स्वास्थ्य र चिकित्सा मा भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले माफियाहरुले प्रश्रय पाउने र सुधारको साटो विकृति आउने देखी मैले प्रेस विज्ञप्तिसमेत निकाली अनसन बस्नु परेको हो । यो वयानको क्रममा समेत अनसनमा छु । मलाई सुधारको प्रयास गर्दा गर्दै यसरी एक्कासी प्रहरीको सहयोग लिई अदालत समय वयानका लागि ल्याइएको छ । यस अदालतबाट भएको आदेशमा निजी मेडिकल कलेजले प्रश्रय पाउने, गुणस्तरहीन स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति विसंगति आई ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जीउधनप्रति खेलबाड भइरहेकाले यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध लड्नु मेरो कर्तव्य हो । मेरो भनाइ गलत निर्णय दिने न्यायाधीशविरुद्ध हो, न्यायलयविरुद्ध होइन ।
गरिमामय पदमा रहेको प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिन सक्ने न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको नेतृत्व निश्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने आर्दशवादी, अनुकरणीय व्यक्ति हुनुपर्नेमा नागरिकतासम्वन्धी विवाद, चूडामणिसम्वन्धी राजस्व छली, आयल निगम, एनसेल, भूमाफिया र नातावादसम्वन्धी लगायतका क्रियाकलाप गर्दा न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएका कारणले निजबाटै अदालतको अवहेलना भएकाले निजउपर अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने हो । म उपर लगाएको आरोप झुठ्ठा हो । मैले अदालतको अवहेलना गरेको छैन । निज सम्माननीय प्रधानन्ययाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानविनको दायरामा ल्याई कारवाही गरी न्यायालयको गरिमाको वृद्धि हुन्छ । अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र बन्छ ।
Press Statement of Revolutionary Maoist : About outbreaks of Corona Virus (Covid-19)
Press Statement The pandemic, caused by Corona Virus, has now wrapped up the entire world. The number of people infected by this...
२०७४–चुनाव, English News Read More
चैत्र १९, वासिङ्टन — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को...
२०७४–चुनाव, Bichar, Feature News ... , Flash, International News, mainNews, News Read More
१७ चैत, काठमाडौं । भारतले कोरोना (कोभिड–१९)रोकथाम...
समय तिमिसङै थियो अबसर थियो उ टाढै थियो तिमी गाडा...
२०७४–चुनाव, Flash, Nepali Bhasa ... , Sahitya Read More
५७ जना भारतीय बुद्धिजीवीहरूद्वारा राजबन्दी रिहाइको माग
प्राध्यापक हर गोपाल, लेखक तथा पत्रकार वेणु गोपाल,...
२०७४–चुनाव, Bichar, Feature News ... , Flash, News, Prabas Read More